Verše Bible na téma: ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း -> ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
 ထိုမှတပါး မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အချင်းချင်းတယောက်ကို တယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ လူအချို့တို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း စည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွှဲကြနှင့်။ အချင်း ချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအချိန် ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ ကြိုးစား ကြလော့။
Tehdy k němu přistoupil Petrařekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešitajá mu mám odpustit? Sedmkrát?"
 To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýřeaučitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víryapoznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.
 Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klidasílily; žily v Hospodinově bázniapovzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církveacestou přišel také ke svatým v Lyddě.
Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
၂ တိမောသေ 4:2
 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatéhoaučte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."